जीवन शैली: चंगा कसरी उडाउने? | Bishow Nath Kharel
जीवन शैली: चंगा कसरी उडाउने?
आश्विन ४ –
दसैंको बिदा हुन लाग्यो। अब के-के गर्ने भनेर सबैको मनमा कुरा खेलिरहेको होला। दसैंमा कोही आफ्नो घर जाने, कोही घुम्न जाने, कोही साथीहरूसँग मिलेर चंगा उडाउने योजना पनि होला। दसैंको मुख्य मज्जा भनेकै चंगा उडाउने, टीका लगाउने, घुम्ने, नयाँ लुगा लगाउने नै हुन्। हामीमा चाहिँ वषर्ाका देवता इन्द्रलाई पानी पार्न रोक भनेर संकेत गर्न चंगा उडाइने मान्यता छ। अन्य देशमा मनोरञ्जनको रूपमा उडाउने गरिन्छ। चंगा प्रायः बालबालिका सबैले उडाउने हुनाले दसैंमा यो लोकपि्रय खेलको रूपमा रहन्छ। तर चंगा मनोरञ्जनका लागि उडाए पनि सावधानी प्रशस्तै अपनाउनुपर्छ। नत्र दुर्घटना पनि हुन सक्छ।
– सहर बजारमा सडक पेटीमा बसेर चंगा उडाउने चलन पनि छ। यसरी उडाउँदा पैदल यात्री, साइकल चालक र मोटरसाइकलमा सवार व्यक्ति धागोमा अल्भिmएर दुर्घटनामा पर्न सक्छन्।
– खुला स्थानमा बसेर उडाउँदा आकाशमा राम्ररी उड्न पाउँछ जसले हामीहरूलाई राम्रो मनोरञ्जन दिन सक्छ। त्यसैले चंगा उडाउनुभन्दा अगाडि अग्लो स्थानको छनोट गर्नु राम्रो हुन्छ।
– अग्लो स्थानमा बसेर चंगा उडाउँदा मज्जा आउँछ भनेर घरको छत वा अग्लो स्थानमा एक्लै बसेर उडाउनु हँुदैन। यसरी उडाउँदा अभिभावक, विश्वासिलो साथीसँग मिलेर मात्रै उडाउनुपर्छ। यसरी उडाउँदा अभिभावकले हामीहरूको सुरक्षाप्रति पूर्ण रूपमा चासो दिइरहेका हुन्छन्। दुर्घटना भएमा तुरुन्त अस्पताल पुर्‍याउन पनि सक्छन्।
– चंगा उडाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हावाको बहाव नै हो। यो हेरेर चंगा उडाउँदा यदि हावाको बहाव भएको तर्फ सूर्य पर्छ भने त्यो बेलामा आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। सूर्यको प्रकाशमा प्रत्यक्ष हेर्दा आँखाको ज्योतिलाई नोक्सानी गर्न सक्छ। यस्तो स्थितिमा चंगा नउडाउनु नै राम्रो हुन्छ। यदि उडाउनु नै छ भने चस्माको प्रयोग गर्नुपर्छ। उडाउँदा सामान्यतः २-३ घन्टा व्यतीत हुन्छ। फेरि चंगा घाम लागेको बेलामा उडाउने हुनाले सूर्यको प्रकाशबाट जोगिन छालामा सन्स क्रिमको प्रयोग गर्नु र हयाट लगाउनु राम्रो हुन्छ।
– लगातार चंगा उडाउँदा हातको छाला जान सक्छ। यो बाहेक चंगा उडाउने धागो धारिलो हुने हुनाले नांगो हातले धागोलाई बेस्करी तान्दा हात काट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तो समस्या हुन नदिन पन्जा लगाउनुपर्छ ।
– आकाशबाट काटिएर आएको चंगा पाउन तँछाडमछाड गरेर सकभर जाने गर्नु हुँदैन। यदि गइन्छ भने वरिपरि हेरेर मात्र जाने गर्नुपर्छ। काटिएर आएको चंगा जहाँ पनि जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा सडकमा होस् वा रूख वा बिजुलीको खम्बाजस्ता स्थानमा पुग्न पनि सक्छ। जोसिएर जाँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
प्रकाशित मिति: २०७१ आश्विन ५ १२:१०
जिज्ञाासा: चंगा कसरी उड्छ?
दसैं आउन लागेपछि हामी सबैले आकाशमा चंगा उडेको पक्कै देखेका छौं। यो बाहेक धेरैले चंगा उडाएका पनि छौं होला। तर चंगा कसरी उड्छ भन्ने कुरा भने कमैलाई थाहा होला। चंगा दुई किसिमको सन्तुलनका आधारमा आकाशमा उड्छ, त्यो हो- गुरुत्वाकर्षण र हावा। गुरुत्वाकर्षणले हावामा भएको कुनै पनि वस्तुलाई जमिनतर्फ झार्छ भने हावाले कुनै पनि वस्तुलाई माथि माथि लैजाने काम गर्छ। हावाको बहावले हलुंगो वस्तुलाई अझ सजिलै माथि लैजाने हुनाले चंगा पनि यसरी नै माथि माथि जाने गर्छ। यदि चंगामा धागो नबाँध्ने हो भने यो अनियन्त्रित हुन्छ। जस्तो हामीले उडाएको चंगा जुधाउँदा काटेपछि कहिले त्यो र्झछ, कहिले हावाको बहावमा परेर अनियन्त्रित रूपमा झन् माथि जान्छ।
प्रकाशित मिति: २०७१ आश्विन ५ १२:१३
Source : http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=330256